Forum serasera malagasy Inona no mahapotika ny kolontsaina malagasy? - Dinika forum.serasera.org
Inona no mahapotika ny kolontsaina malagasy?
Fitohizan'ny hafatra : Inona no mahapotika ny kolontsaina malagasy?
201007jacky - 29/09/2016 14:29
Efa nantitranterina teo aloha ny famaritana araka ny fahalalako azy ny atao hoe "kolontsaina"
Eto indray dia ny mety mahapotika io harena io no andeha hasiana resaka.
Singa roa no eritreretiko mahapotika io, izay azo heverina ho singa fototry ny fahapotehany, dia ny:
1. Tsy fampitana azy intsony,
2. Ny zava-baovao vahiny.
1. Tsy fampitana azy intsony
Noho ny tsy fananana tahiry na lovan-tsofina avy amin'ireo Ntaolo sy ireo zanak'antintra na ireo zokiolona dia sakana iray goavana mahapotika ny kolontsaintsika. Misy ireo manana azy nefa minia mitazona azy ho tsimbaratelo. Vokatr'izany dia olom-bitsy no misitraka izany ary dia lasibatra ireo taranaka liana hahafantatra.
Tsy manana vitrika na fotoana hamaky boky sy hitsidika ireo tranombakoka ny olona, noho ny adim-piainana sy ny asa aman-draharaha samihafa. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fotoana fa vao tonga any an-trano dia lampana sy reraka: misakafo dia samy manao izay filàny kely dia matory. Sady efa tsy sofina intsony mantsy no tena mahazatra (LOVANTSOFINA), fa maso, hany ka tsy tafita amin'ireo taranaka ny hafatra mamin'ny fahiny.
2. Ny zava-baovao vahiny
Tsy isalasalana, mibaribary tsy takona afenina tahaka ny vay an-kandrina ny fihanak'itony zava-baovao vahiny itony, izay mamotika ny kolontsaina malagasy.
Marihiko etoana fa tsy ny zava-bahiny tafiditra eto dia ratsy avokoa na ny zava-baovao vahiny no ratsy, fa ny fandraisana azy, ny tsy fahaizana mandanjalanja no mahapotika ny an'ny tena. Eo ihany koa ny tsy fitondrana fanatsarana ny antsika, hany ka aleon'ny Malagasy maro sasany mirona amin'ny an'ny vahiny, izay mahaliana amin'ny endrika ivelany fotsiny.
Mety hahatohina ihany ny milaza fa "TIA VAO" isika: "SODOKA NY AKANGA TSARA SORATRA, KA MANARY NY AKOHO TAMANA AN-TRANO."
Ireo hita misongadina fa very hasina dia ny "TENY, NY FOMBA FITAFY SY FIHETSIKA", araka ny hevitro.
Mba henoy moa ny vahiny, ohatra ny Frantsay raha mba miteny. Moa ve mampiasa teny anglisy izy na manafangaro fitenim-pirenena hafa. Mba jereo ny indianina izay miroborobo ara-kolontsaina sy ara-toe-karena, noho ny fitazonany sy ny fikolokoloany ny maha-izy azy ny vako-maminy!
Faly mandray fotsiny, tsy an-kandinika fa mandahatra ho lohalaharana izay mahafinaritra eo alohan'ny mahasoa.
Raha fomba fitafy no jerena dia mahamenatra ihany ary ialana tsiny fa toa ny vehivavy no tena andairany : itony zipo manara-pe, sns... tsara anie ny zipo vahiny fa ataovy manaraka ny kolontsaina fotsiny eh!
Ny lehilahy amin'izato hety manahaka irony vorona lava sanga irony. Moa ve mba fantatsika ny dikan'izany hoe "TEKTONIKA"? Iangaviana ianao hamadika rakibolana hizaha ny hevitr'izany.
Io hety io dia manana ny lanjany ao amin'ny fiarahamonina malagasy. Izay endriny no endri-pisainana sy itondrany ny fiainany.
Eo ihany koa ny pataloha izay mampiseho ny tokony hafenina ao anatiny.
Izany rehetra izany dia antony mahavery hasina, ka anisan'ny tsy mampandroso ny firenena malagasy. Tsy midika anefa fa mirona amin'izany daholo ny Malagasy rehetra. Koa velomy ny ain'ny kolontsaintsika, mamakia boky dia lanjalanjao sy fidio izay tsara, ario izay ratsy. Aza atao toy ny "VALALAN'AMBOA ny kolontsintsika, KA NA NY TOMPONY AAZ TSY TIA AZY".
tiamamboly - 10/11/2016 12:50
Antony roa no nahapotika ny kolotsaina malagasy , voalohany dia ny fanjanahatany , faharoa dia ny fomba nampidirana ny fivavahana kristianina teto, irréversible io fahapotehana io, izay no anisany mampahantra fadiranovana antsika, ary hijanona ahantra
Prime - 01/04/2017 10:52
Faly miarahaba antsika rehetra tompoko!
Misy afaka mamaly ve hoe inona marina moa ilay hoe : kolon-tsaina malagasy ?
endriny - 01/04/2017 13:49
Ny kolotsaina dia izay rehetra mikolo sy manabe ny saina ka voafaritra toa ireto izy:
1. Ny toerana sy ny manodidina
2. Ny fiteny
3. Ny fomba
4. Ny fampianarana
Raha eto Madagasikara izany isika dia kolotsaina Malagasy avy hatrany no tokony ananana, kolotsaina voafehin'ny faritra Madagasikara sy ny zava-manan'aina ary vohontany eo aminy. Dia mizara efatra mazava eto: ny kolon' ny mpiandriaka, ny kolon'ny tatsimo sy andrefana (hay), ny kolon'ny morontsiraka mafana, Ary ny kolon'ny tendrombohitra.
Ny fiteny dia miteny Malagasy isika, izay ezahin'ny mpanao politika sy ny mpitsikomba arodana ka soloina tenibaiko. Ny tenim-partirá moa dia zara raha ampianarana mba hikoloina ny fizarazarana.
Ny fomba indray dia samy nanana ny fombany ny Isam-poko fa ny tena lehibe amin'ireo dia ny Sampy, izay ezahin'ny finoana Kristianina ravana, ny fomba fifanajana mifototra amin'ny fizokiana sy ny fanajana manokana ny vehivavy izay kitapo nifonosana ary ny fanajana ny natiora ipetrahan' ny jiny. Ireo rehetra ireo dia manjavona rehefa lasa Kristianina ny fokontany iray.
Ny fampianarana moa dia efa hitantsika rehetra
Page rendered in 26.6597 seconds